Sonke e obuhlukahlukene degrees wayeyazi le nkinga uma ufuna ukudala induduzo ekhaya sikhule izitshalo zasendlini, futhi abenzele ezenza bengayi ngenxa yokuntuleka ukukhanyisa efulethini. Iningi it is obuzwiwa abakhileyo izitezi kanye nalabo amawindi zibheke enyakatho. Uma ihlobo namanje kwelanga ngezinye izikhathi ukungena efulethini ebusika namanje izitshalo ukukhanya-onothando oyogula, ukusetha kabusha we amahlamvu, futhi kuyenzeka ife.
wenkinga yakho ekhaya engadini kuleli cala zingaxazululwa ngezindlela ezimbili. Esimweni sokuqala, udinga ukufaka izibani ezikhethekile ukuthi ahlinzeke ukukhanyisa, njengoba eduze Sun ezakhiweni zalo. Nokho, le ndlela kungakusiza hhayi "ukukopela" zonke izitshalo, abaningi abanjalo ezingezwakali eningizimu izitshalo, intando namanje uhlushwa ukuntuleka ukukhanyisa. Nakakhuluma ngalabo izitshalo, okuyinto ujabulele ukukhanya, ungakwazi kuphela ukwaba ikamelo violets (Saintpaulia).
Ukuze uxazulule le nkinga ngendlela elula ukusiza umthunzi-onothando izitshalo. Zikhula kahle futhi ukhule kahle emthunzini, ngoba ungathandi elangeni. Lezi ezimila kuleli zasendle emahlathini asezindaweni ezishisayo, lapho hlabathi kuyafana twilight ukukhanyisa, kanye inqwaba ezindlini zasemadolobheni. Kodwa le ndlela angafaneli uma uthanda, lapho efasiteleni lakho ukuqhakaza egqamile futhi izimbali ezinhle futhi ungathandi oluhlaza isihlahla isitshalo. izitshalo Shade endlini ikakhulukazi abe isihlahla zokuhlobisa noma amahlamvu. ukuqhakaza Beautiful phakathi kwabo okuncane kakhulu. Kungenzeka uma sibala ezimbalwa nje kuphela izinhlobonhlobo begonias futhi camellias, hibiscus kanye okufanayo Igumbi violets (ngokuhlukahluka okuthile kweminye ukubhuka).
Lapho ekhetha izitshalo ngoba ingaphakathi yakho ezindaweni amnyama kufanele kukhunjulwe ukuthi lezi zitshalo zihlukaniswe umthunzi-ukubekezela umthunzi-onothando izitshalo. Ngokuhambisana igama layo umthunzi-ukubekezela ukukhanyisa enganele ahlupheke buthule, kodwa ne Ukuhlanganisa best ozokhula futhi ikhule ngokushesha kakhudlwana (nakuba bangakwazi uhlushwa Ukukhanya kwelanga kakhulu).
Shade houseplants uzizwa ukhululekile kuyinto emthunzini, futhi abanye babo nje abakwazi ukubekezelela ukukhanya kwelanga. Lezi zihlanganisa, isibonelo, zonke ivy. ivy Evamile "Birch" futhi ezahlukeneyo zalo zisiza ekudalweni zesikrini oluhlaza egumbini futhi buthule ukubekezelela ngisho blackout unomphela. Kuhambisana kahle izinjongo ezifana nazo isitshalo eziningi imikhaya Araceae, isib, philodendron, Syngonium futhi Epipremnum. Kumele kukhunjulwe ukuthi ilizwe libe izitshalo zasendlini Kulezo zimo kufanele kube njalo esemanzi, njengoba endle zikhula ehlathini efudumele futhi zinomswakama futhi awukwazi ukubekezelela inhlabathi eyomile.
Phakathi lezi zitshalo kungenziwa Monstera ezikhonjwe - lolu hlobo umvini kuchuma ikamelo kulungiselelwa. ikhule ukuphakama ngaphansi kwezimo ezikahle kuze kufinyelele 3-5 amamitha. Igama lawo lisho ukuthi e-Latin yinqaba, isimanga, kodwa livame ukubizwa "crybaby." Isici ezithakazelisayo wukuthi amathiphu amaqabunga e sezulu esinamafu kukhona amaconsi. Ngakho Monstera ongabikezela sezulu usuku: kwakukhona amathonsi - ukulinda imvula.
isitshalo Original izimbali bright red poinsettia sesibili zetayitela yayo yasekuqaleni - poinsettia. Azonakekela injabulo yakhe. Nobuhle ukuqhakaza efihlekile ufaneleke umzamo. Akuve linesizotha futhi ayidingi ukunakekelwa okukhethekile, wena nje ungakhohlwa ukuthi isikhathi wenza efaka umquba houseplants. Ukuze ondle le ubuhle kufanele kube njalo ngemva kwamasonto amabili, kusukela kwentwasahlobo kuze ekwindla. Sikhula kuphi, evikelwe ngokuphepha kusuka okusalungiswa. Ngaphezu kwalezi izitshalo, ungakwazi sinake dracaena, dieffenbachia iraba izitshalo.
Kurnik iresiphi yendabuko Puff khekhe
Emahhotela aphambili e Belokurikha: ulwazi kanye nokubuyekezwa